လူငယ် ၁၃ ဦးကို အောင်မြင်စွာ ကယ်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရူံးမှုကြီးတစ်ခု ကြုံလိုက်ရတဲ့ Dr Richard Harris – ရှအေလငျး
လူငယ် ၁၃ ဦးကို အောင်မြင်စွာ ကယ်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရူံးမှုကြီးတစ်ခု ကြုံလိုက်ရတဲ့ Dr Richard Harris
မယ်ဆိုင် ကျောက်လှိုင်ဂူအတွင်းက တောဝက် လူငယ်ဘောလုံးအသင်းဝင် ၁၃ ဦးကို အောင်မြင်စွာ ကယ်ထုတ်ပေးခဲ့သူ သြစတေးလျနိုင်ငံသား Dr Richard Harris ဒေါက်တာ ရစ်ချက်ဟဲရစ် ဟာ ကယ်တင်ရေးမစ်ရှင်အပြီး ကျောက်ဂူအတွင်းပြန်ထွက်လာချိန်
သူရဲ့ ဖခင် သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသြစတေးလျ က မိသားစုကအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ :Adelaide’s Dr Richard Harris’ father passed away last night shortly after the successful cave rescue mission.
မယျဆိုငျ ကြောကျလှိုငျဂူအတှငျးက တောဝကျ လူငယျဘောလုံးအသငျးဝငျ ၁၃ ဦးကို အောငျမွငျစှာ ကယျထုတျပေးခဲ့သူ သွစတေးလနြိုငျငံသား Dr Richard Harris ဒေါကျတာ ရဈခကျြဟဲရဈ ဟာ ကယျတငျရေးမဈရှငျအပွီး ကြောကျဂူအတှငျးပွနျထှကျလာခြိနျ
သူရဲ့ဖခငျ သဆေုံးသှားပွီဖွဈတဲ့အကွောငျးသွစတေးလြ က မိသားစုကအကွောငျးကွားခဲ့ပါတယျ။ :Adelaide’s Dr Richard Harris’ father passed away last night shortly after the successful cave rescue mission.
ကလေးဆေးရုံးမှာခရစ်စမတ်ဘိုးဘိုးပုံစံဝတ်ခဲ့ပြီး suprise လုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဟောင်းအိုဘားမား
အဆင်မပြေ ချို့တဲ့ပြီး ဘဝကိုရုန်းကန်နေရတဲ့...
လားရှိုး တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှ ကျောင်းသားလေးတွေ တီထွင်ထားတဲ့ ဆိုလာစနစ်သုံး...
” ဆင်းရဲတွင်းနက် နက်သည်ထက်နက်”လာကြတော့လဲ..ငရဲတောင်...
ရေးမြို့ မှာ လူ ၁၀၀၀ ကျော်ပိတ်မိပြီး မြို့ရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်...